SAE 1008 SPCC coils vy mangatsiaka voahodina mafy
famirapiratana / faranana mainty malefaka, mafy, niasa Steel Strip / Strips vy mangatsiaka:
Max. Sakany (sisin'ny fikosoham-bary): 720 mm
Min. Sakany (sisiny): 39 mm
Max. Hateviny: 2.0 mm
Min. Hateviny: 0.3 mm
Anatiny savaivony: 400mm na 508mm
Avaratra savaivony: 850 ~ 1500mm
SAE 1008 Coil Steel Carbon Rolled Cold miaraka amina mafy dia ampiasaina amin'ny fiara, paosy vy vita pirinty, fananganana, akora fananganana ary bisikileta, sns. Ankoatr'izay, izy io no fitaovana tsara indrindra hanamboarana strip mifono organika
Big Zero Spangle ho an'ny rindrina ivelany dia mihosin-kofehy vy mifono vy metaly mifono vy
1. Fanamboarana: singa amin'ny tafo sy ny tafo, ivelan'ny rindrin'ny trano sivily sy indostrialy, varavarana garazy ary varavarankely.
2. Fitaovana fonenana: milina fanasan-damba, vata fampangatsiahana, fahita lavitra, rafitra misy rivotra sy rivotra, fanadiovan-drivotra, heater rano amin'ny masoandro.
3. Fitaterana: valindrihana fiara, fiarakodia Auto Muffler, ampinga hafanana amin'ny fantsom-pamokarana sy mpanova catalytic, ny sambo lehibe, ny arabe.
4. Indostria: fitaovana indostrialy Kabinetra fanaraha-maso herinaratra, fitaovana fampangatsiahana indostrialy, milina fivarotana mandeha ho azy
5. Fanaka: jiro, kaontera, takelaka ary toeram-pitsaboana sns.
AZ Coating amin'ny spangle tsy tapaka Hot natsoboka vy nandrisika Sheet mafana nilentika nandrisika Steel
Loharanom-pandrefesana lozisialy tsy misy slip Brite alimika alim-by
RuiYi Aluminium Amin'ny maha-iray amin'ireo mpanamboatra takelaka vita amin'ny alim-pito vita amin'ny alim-baravarankely dia afaka manome ny karazan-takelaka fanamarinana rehetra, toy ny diamondra amin'ny takelaka, takelaka mitaingina, ny tohatra tohatra tsy misy slip ary ny gorodon'ny takelaka fanamarinana
Ny takelaka aliminioma dia ampiasaina hananganana vokatra marobe izay ilaina amin'ny indostrian'ny trano, fiara, aerospace ary nautical. Ohatra, ny takelaka vita amin'ny aliminioma dia ampiasaina hanamboarana sisin-tany sy tafo ho an'ny trano sy tontonana ho an'ny fiara, fiaramanidina ary sambo. Satria maivana ary mahazaka harafesina sy harafesina ny ravina aliminioma, mora apetraka izy ireo ary voaporofo amin'ny toetr'andro. Izy ireo koa dia mandray tsara ny dona, lafiny fiarovana lehibe ho an'ny fiara manokana.
JIS G3302 SGCC Zinc Coating 275g / M2 Metal mitafo fanitso taratasy
Takelaka fonenana vy, takelaka misy finday.
(1) mamolavola modely mahafinaritra, loko manankarena, haingon-trano, fitambarana malefaka, afaka maneho fomba hafa
(2) fametrahana mora ny fananganana, mampihena ny fametrahana, ny enta-mavesatra amin'ny fitaterana, mampihena ny vanim-potoana fananganana;
(3) Ny takelaka fanerena dia fitaovana fananganana tontolo iainana, azo averina, mampiroborobo ny fampiasana vy
mifanaraka amin'ny politikam-pampandrosoana maharitra ny toekarem-pirenena;
SPCD / SPCE / DC03 dia nanapaka ny coils / coil vy
Tora-by vita anaty vy mangatsiaka anaty coil
Kalitaon'ny sary lalina
1 Hateviny: 0.3-2.0mm
2 Sakany: 700-1250mm
3 Avaratra savaivony: 508mm
Kilasy 4 vy: SPCD, SPCE, DC03
Fonosana 5: fonosana fanondranana mahazatra
6 Ny fanapahana sy ny fikosehana dia azo angatahina amin'ny fanendrena ny mpanjifa.
Izy io dia mety amin'ny tranobe indostrialy sy sivily, trano fanatobiana entana, fananganana manokana, firafitra vy lehibe misy tampon-trano, rindrina ary ravaka anatiny sy ivelany. Ny maivana, tanjaka ambony, manan-karena loko, fanamboarana mety, horohoron-tany, afo, orana, fiainana lava, toetra tsy misy fikojakojana, no be mpampiasa.
4. Indostria: fitaovana indostrialy Kabinetra fanaraha-maso herinaratra, fitaovana fampangatsiahana indostrialy, milina fivarotana mandeha ho azy.